कोरोनाका बिचमा बिदेशी पर्यटकका लागि ढोका खुल्ला, के होला अवस्था? - HarekKhabar.com
कोरोनाका बिचमा बिदेशी पर्यटकका लागि ढोका खुल्ला, के होला अवस्था?
आउदो शनिबारदेखि विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल आगमन खुला हुँदैछ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र सन्त्रासकै बीच सरकारले विदेशी पर्यटक आगमन खुला गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी कात्तिक १ अर्थात् अक्टोबर १७ देखि पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटकलाई खुला गर्नेगरी अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तो भिसा ससर्त कोभिड–१९ रोकथाम तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पूरा गरेकाहरूका लागि मात्र उपलब्ध गराइने सरकारले बताएको छ ।
जसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि नै स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अनअराइभल भिसासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिसकेको छ ।
पदयात्रा र पर्वातारोहणका लागि नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ भने नेपाल आइसकेपछि अनिवार्य ७ दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र हिँडडुल गर्न नपाइने मापदण्ड मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्र बनिरहेको बेला विदेशीहरूको आगमनसमेत खुला गर्ने सरकारी निर्णय थप ‘आगो माथिको घिउ’ बन्न सक्छ । यसअघि छिमेकी मुलुक चीन लगायत केही युरोपेली मुलुकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको भयावहको स्थिति रहिरहँदा यता नेपालमा भने विभागीय मन्त्रीले नै ‘नेपाल इज सेफ जोन’ भनेर पाहुना डाकिरहे जस्तो हुन सक्छ । अन्तत्वगत्वा यो मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ ।
प्रमुखतः कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रमध्येको एक हो पर्यटन क्षेत्र । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको उहानमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएसँगै प्रभावित हुँदैआएको नेपाली पर्यटन क्षेत्र आजको दिनसम्म प्रभावित नै छ । गत चैत ११ गतेदेखि त झन् मुलुक पूर्णतः लकडाउनमा गएसँगै थप प्रभावित हुन पुगेको पर्यटन क्षेत्रले सो अवधिमा झण्डै आधाआधी खर्बको नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गएको ६ महिनामा नेपाली पर्यटन क्षेत्रले झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अझै व्यावसायिक अन्योल कायमै राखिराख्ने र व्यावसायिक सुरुवात नगर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
त्यसो त पर्यटन क्षेत्रको ताजगीका लागि भने पनि अन्य क्षेत्र जस्तै सो क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग राखिरहेका छन् ।
यही माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि विदेशी पर्यटक आगमन खुला गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्धबहादुर तामाङले रातोपाटीसँग बताए ।
‘लामो समयदेखि बन्द रहँदा नेपाली पर्यटन क्षेत्रले अर्बांैको नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । अब पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्र सुचारु नहुने हो भने धेरैको रोजीरोटी गुम्ने खतरा छ ।’
महानिर्देशक तामाङले भने ‘यस्तो अवस्थामा मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाइराख्न पनि सरकारले व्यावसायिक क्षेत्र खुल्ला गर्नुपरेको हो । सोही माग र दबाबकाबीच सरकाले कात्तिक १ गतेदेखि विदेशी पर्यटक आगमन खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि कहिलेबाट खुला हुन्छ भन्ने मिति चाहिँ अझै ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । १ गतेबाटै हुन पनि सक्छ, केही दिन पर सर्न पनि सक्छ । अहिलेसम्म थप निर्णय नआएकाले पूर्वनिर्धारित मितिमै खुला हुन्छ कि भन्नेमा छौँ’ तामाङले भने ।
अहिलेकै अवस्थामा झन् झन् सङ्क्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा विदेशी पर्यटक आगमन खुला गर्नु कत्तिको व्यावहारिक हो रु भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक तामाङ आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलको कडाइकासाथ लागू गरिने हुँदा समस्या नहुने बताउँछन् । त्यसमाथि सबै खाले पर्यटकका लागि नभएर पदयात्रा र पर्वातारोहणका लागि मात्र खुल्ला गरिने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले खुल्ला गर्ने भनेको पदयात्रा र पर्वातारोहणका लागि आउने विदेशी पर्यटकका लागि मात्र हो, त्यो पनि कडा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका साथ । यसले समस्या नल्याउने सरकारको बुझाइ छ । त्यसमाथि पूर्णतः गाइडेड टुर भएकाले पर्यटक जथाभावी हिँडडुल गर्न र धेरैसँग संसर्ग गर्न पाउँदैनन् । जुन ठाउँका लागि भनेर आएका हुन्छन् त्यो ठाउँमा जान्छन् र समय पुगेपछि फर्किन्छन् । टोटल्ली गाइडमा रहन्छन् । एक्लै दुक्लै हिँडडुल गर्न पाउँदैनन् । त्यसमाथि ७ दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा रहेर मात्र भ्रमण गर्न पाउने भएकाले विश्वसनीयता ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा शङ्का गरिरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन,’ तामाङले भने ।
‘लामो समयदेखि बन्द रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अब खोल्नुको विकल्प छैन । यसका लागि अब हामी जसरी पनि तयार हुनुपर्छ । तर यसो भनिरहँदा हामीले के कुरा भुल्न हुन्न भने हतारको मानसिकताले आवश्यक पूर्वतयारी भुल्न हुन्न ।’ जोशीले भने, ‘खोल्ने कुराभन्दा पनि तयारीको कुरा महत्त्वपूर्ण हो । नत्र त अर्को थप ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने खतरा रहन्छ ।
यद्यपि पर्यटन भनेको आफैमा अनुशासित क्षेत्र हो । त्यसैले यसमा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । तैपनि आवश्यक तयारी पूरा गरेर खोल्न सके अझ राम्रो हुने देख्छु,’ जोशीले भने ।